mai 2018 · Page 2 de 5 · déliremadagascar
Socio-eco	 22 mai 2018 R Nirina
Sehatry ny tranokalam-pifandraisana : Nisokatra ny www.fisandratana2030.com
Mandroso ny teknolojia eto Madagasikara ary efa misehatra amin’izany ny Malagasy ankehitriny. Continuer la lecture →
« Tsy hipetra-potsiny izahay olompirenena amin’izao ataon’ny mpanao politika eo amin’ny fitondrana na ny mpanao politika mpanohitra izao. Rehefa misy ny olana politika hatrizay dia vahaolana politika hatrany no natao kanefa tsy nitondra ny firenena nankany amin’ny fandrosoana sy ny filaminana izany. Continuer la lecture →
Vehivavy mandray andraikitra: Omena traikefa sy fahalalana
Ny fampandrosoana lovain-jafy, miankina amin’ny toe-karena, ny tontolo iainana ary eo amin’ny lafiny sosialy. Hisy ny fanentanana sy fampihofanana ny vehivavy amin’ny faritra 22 ho fampandraisana andraikitra azy ireo amin’ny fampandrosoana. Continuer la lecture →
SOMAPRO : Mitondra vahaolana amin’ny fahadiovana
Hizara loka 20 isanandro ho an’ny mpitsidika ny hetsika ara-barotra “Grande Braderie de Madagascar” na GBM ny SOMAPRO. Mpanohana ofisialy ny hetsika izy ireo. Continuer la lecture →
Socio-eco	 21 mai 2018 lynda
MAMAFI: “Aza atao sorona ny fianaran’ny mpianatra”
Mitaraina ny ray aman-drenin’ny mpianatra eny amin’ny sekolim-panjakana toy ny eny amin’ny EPP Tsaramasay amin’ny tsy fianaran’ny zanak’izy ireo. Continuer la lecture →
Socio-eco	 20 mai 2018 R Nirina
MASTER IMMO: Hisy ny tolotra isan-karazany amin’ny fetin’ny reny
Manampy amin’ny fividianana sy fivarotana tany ny “Master Immo”. Mampiavaka azy ny fandraisana an-tanana ny fikarakarana ireo antonta-taratasy. Continuer la lecture →
Socio-eco	 19 mai 2018 R Nirina
ALLO TAXIN’AKA: Tsotra nefa azo antoka.
Fomba iray hahazoana mivezivezy ny “Allo taxin’aka”. Tsy mandany fotoana fa amin’ny alalan’ny antso an-tariby na amin’ny tambajotra serasera faceebook, ahafahan’ny mpanjifa mamandrika taxi. Continuer la lecture →
politique	 18 mai 2018 R Nirina
Antoko ADN: nidina ifotony Mitaky fitsapan-kevi-bahoaka
Samy tsy tafandry mandry amin’ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny ireo izay mihevitra fa manana adidy aman’andraikitra sy mitsinjo ny hoavin’ity firenena ity. Continuer la lecture →